Mintigo: Predictive Lead Scoring yeiyo Bhizinesi | Martech Zone
Sevashambadziri veB2B, isu tese tinoziva kuti kuve neinotungamira mamaki sisitimu yekuona inotengesa-yakagadzirira mafambiro kana vangangove vatengi kwakakosha kumhanyisa yakabudirira zvirongwa zvekugadzira uye kuchengetedza kushambadzira-uye-kutengesa kuenderana. Asi kuitisa inotungamira yekumisikidza sisitimu iyo inoshanda chaizvo zviri nyore kutaurwa pane kuitwa. With Mintigo, iwe unogona ikozvino kuve nemapoinzi ekurovera mamodheru ayo anowedzera simba rekufungidzira analytics uye data hombe kukubatsira kuti uwane vatengi vako nekukurumidza. Kwete zvakare kufungidzira.
Mintigo anga ari iye mutyairi wenzira nyowani nyowani mukuedza kwedu kutungamira kwechizvarwa. Heather Adams, Kushambadzira Manager kuNetFactor
Mintigo Predictive Lead Scoring inoita kuti vatengesi vebhizimusi vawedzere simba rekufungidzira kushambadzira kune ako anotungamira mamaki.
Maitiro eMintigo Predictive Lead Scoring Anoshanda
Mintigo Kutanga nezvamunoziva, kushandisa CRM yako uye kushambadzira otomatiki data.
Iwe unogona kunge uchiziva zvimwe zvinhu nezve ako anotungamira: Ndeapi macampaign avakaona, kwavakadzvanya uye nezvavakazadza pafomu rako. Isu tinoshandisa iyi yakakosha data kutanga kuvaka yako yekufungidzira modhi.
Mintigo inowedzera izvo zvavanoziva, ichiwedzera zviuru zvezviyero zvekushambadzira pamhepo. Mintigo inounganidza uye inoramba ichigadzirisa zviuru zvemashoko emamiriyoni emakambani. Ruzivo urwu rwunosanganisira ruzivo rweveruzhinji nezve zvemari, vashandi, kuhaya, matekinoroji, kushambadzira uye nzira dzekutengesa pamwe nekuongorora kwesemantic kwekambani yedhijitari. Mhedzisiro - 360-degree profile yemutungamiriri wega wega mudhatabhesi yako.
Mintigo inoshanda kufanofungidzira analytics, crunching hombe dhata nemuchina kudzidza kutsemura iyo CustomerDNA ™. Mintigo inotora data rako, redu pachedu, uye yako yepamusoro kukosha inotungamira uye inoshandisa muchina kudzidza kutsvaga yako CustomerDNA ™, seti yezviratidzo izvo zvinoita kuti zvive zvakasarudzika zvichienzaniswa nezvimwe zvese zvinotungamira mune yako dhatabhesi. Mhedzisiro yacho seti yezviratidzo uye yekumakita modhi iyo inogona kufanotaura mukana wekushandura.
Mintigo inoverenga yako inotungamira dhatabhesi, ichiratidza yako yakakosha mapoinzi. Mintigo inoshandisa yako yakasarudzika yekufungidzira yekumakita modhi kunongedza ako aripo anotungamira uye ese anotungamira anopinda mune yako fanera mune yako Kushambadzira uye MaSystem masisitimu seEloqua, Marketo uye Salesforce.com. Izvi zvine chekuita pamari yaunowana-Zvino unoziva izvo zvinotungamira kutumira zvakananga kuKutengesa uye ndeapi ekuramba uchirera.
Mintigo Inobatanidza Natively neOracle Kushambadzira Cloud
Mintigo inobatsira vatengesi kuwana vatengi nekukurumidza vachishandisa kufungidzira analytics. Iwe unogona nehungwaru kukoshesa hukuru hukuru hwevatungamiriri uye gadzira zvakasarudzika mishandirapamwe neruoko-ruzere rwemabatani.
Fungidzira iwe uchangopedza kugadzirisa zvekare mafomu ako uye mapeji ekumhara. Zvese zvinotaridzika zvakanaka kune yako nyowani webhusaiti kuburitsa uye yako timu yekutengesa inofara. Nemushandirapamwe wawakangogadzira, iwe unozogadzira zvinotungamira pasina nguva. Eloqua inoita kuti maitiro aya ave nyore. Zvino, chii chinotevera?
￼￼Mintigo yakagadzira kusangana kwakasarudzika uchishandisa Eloqua nyowani Oracle Kushambadzira AppCloud chikuva, kuunza Kufanotaura Kushambadzira muEloqua kekutanga nekukubvumidza iwe kuti utore dhata dzinofambiswa nedata ipapo ipapo.
Mintigo inosimudza simba redata hombe uye fungidziro analytics kuitira kuti uwedzere kushambadzira kwako. Mintigo inoita kuti iwe ugone kufanofungidzira mamodheru mamodheru kune imwe neimwe yako misika yekutengesa. Kune yega yega yekufungidzira modhi, Mintigo inounganidza yako nhoroondo dhata kuitira kuti uvake yakasimba kwazvo modhi.
Nezviverengero zvekufungidzira zvaMintigo uye zviratidzo iwe unogona kuve nechokwadi chekuti unotarisisa kune vakanaka kutaurirana, zvichikugonesa kuti uwane vatengi nekukurumidza.
Zvino neMintigo nyowani yeOracle Kushambadzira AppCloud kusangana, pese paunenge uchida kuita sarudzo yekufungidzira ingo dhonza Mintigo's Action block muCampaign Canvas. Ingo gadzira Mintigo's Action block kuti unyore zvinouya zvako zvinopesana nemhando chaiyo uye iwe unobva wagamuchira chibozwa chekufungidzira muEloqua kana uchinge wamhanya mushandirapamwe. Pamusoro peizvozvo, Mintigo inosundirawo chero chiratidzo cheshambadziro chaunosarudza muEloqua, ichibvumira chikamu chakakwenenzverwa uye rumwe ruzivo rwevatengesi.
Mintigo ichave inodzora traffic traffic mune yako Eloqua kushambadzira otomatiki. Kutanga, iwe unogona kuve nechokwadi chekuti yepamusoro yakakwikwidza meseji inotora bullet chitima uye uwane yavo nzira kune yako yekutengesa timu nekukurumidza. Chechipiri, iwe unogona kugadzirisa ako mushandirapamwe uye kusimudzira matraki kuti uwanezve nevateereri vako zvichibva pane zvekushambadzira zvaMintigo.
NaEloqua naMintigo unogona kuve nechokwadi chekuti iwe unotora nzira yakanakisa kune yega yega shamwari dzako nekuvandudza yako meseji uye yepazasi mhedzisiro mhedzisiro.
Tags: crm lead kurovaeloquabhizinesi kutungamira kurooraheather adamsLinkedInmarketomintigonetfactorpangatauraOracle Kushambadzira AppCloudOracle kushambadzira gorepredictive lead scoresalesforcesalesforce.com